बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने, आफू गाडी चढेर तमासा हेर्न निस्कने?:प्रधानमन्‍त्री ओली - DURBAR TIMES
HomePoliticsबन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने, आफू गाडी चढेर तमासा हेर्न निस्कने?:प्रधानमन्‍त्री ओली
बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने, आफू गाडी चढेर तमासा हेर्न निस्कने?:प्रधानमन्‍त्री ओली
काठमाण्डाै | नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आमहडताललाई गाडी चढेर निरीक्षण गरेको बिषयमा प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्य गरेका छन्।
अखिल नेपाल किसान संगठनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्‍त्री ओलीले प्रचण्डले प्राडो र नेपालले स्कुटी चढेर निरीक्षणमा उत्रेको विषयमा व्यङ्ग्य हानेका हुन।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई अनावश्यक रूपमा हप्की–दप्की नगर्न र कानुनको पालना गर्न सुझाव दिए । प्रचण्ड–माधव समूह आक्रामक ढङ्गले अघि बढेको तथा नियम तोड्ने धाकधक्कु लगाउने र कानुन मान्दिनँ भन्दै प्रहरी प्रशासन तथा निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिँदै हिँडेको उल्लेख गर्दै उनले अब ‘कानून मान्दिनँ’ भन्ने जमाना नभएको बताए।
उनले भने, कानुनको पालना गर्नुहोस्, हप्की–दप्की गर्ने होइन । कानुनको पालना गर्न सिक्नुहोस् । लोकतन्त्र भनेको कानुनको राज हो । बलमिच्याँइको राज होइन । प्रचण्डलाई म सम्झाउन चाहन्छु । ती दिन गए जति बेला तपाईँ संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ भनेर उपद्रो मच्चाएर हिँड्नुभएको थियो । त्यो जमाना गयो । अब कानुनको पालना गर्नुहोस् । अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ । हामी यहाँ छौ भनेर ।’
आम हड्ताल आह्वान गरेर प्रचण्ड–माधव समूहले नागरिकलाई दुःख दिएको र आफूहरु चाहिँ गाडी र मोटरसाइकलबाट नागरिकले पाएको दुःखको तमासा हेर्दै हिँडेको बताए । उनले कार्यकर्ता नभएर नेताहरू आफै सडकमा उत्रिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।
उनले भने, ‘बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी सडकभरि फ्याँकेर क्रान्तिकारिता देखाउनुभयो । अरूका गाडी जलाउनु भो, आफू गाडी सयर भएर तमासा हेर्दै नागरिकले कति दुःख पाएका छन् हँ भनेर ? गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नुभयो । अर्को गाडी चढ्न अलि भएन, आफैले बन्द गर्‍या गाडी नै त नचढुँ भनेर बाइकसम्म त हुन्छ भने र बाइक लिएर हिँड्दै नागरिकले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो । कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, कार्यकर्ता यता छन्, कहाँबाट होस् त उता । कार्यकर्ता सिद्धिएछन् अनि आफै हामी यहाँ छौ भन्ने एउटा टाँस्यो अनि गाडी रोक भनेर को उभिएको छ भनेर हेरेको त प्रचण्ड उभिइराखेको । उभिएको कस्तो ठाउँमा फेरि सातदोबाटोमा । साइन बोर्ड लिएर । कार्यकर्ता छैनन् सिद्धिएछन् । आफै उत्रनुभयो ।’
Previous articleमुलुकभरका लागि नेपाल टेलिकमले ल्यायो फोरजीमा चल्ने वाईफाई
Next articleहड्ताल गराएर प्रचण्ड भने जब सौखसँग गाडीमा गए